[Review] Top 5 Máy ép dầu nào tốt được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 Máy ép dầu nào tốt được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Máy ép dầu nào tốt được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Impahla yasendlini » [Review] Imishini yokucindezela kawoyela emi-5 ephezulu idumile namuhla
Ukusebenzisa amafutha emifino kuzosiza ukwengeza amavithamini abaluleke kakhulu kanye nezakhamzimba emzimbeni womuntu kunamafutha ezilwane. Akukhona lokho kuphela, ukusebenzisa amafutha emifino kusiza ekunciphiseni i-cholesterol embi egazini, ngaleyo ndlela kunciphise ingozi yezifo ezifana ne-atherosclerosis, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme.
Kungenxa yalesi sizathu esingenhla ukuthi abantu abaningi manje bakhetha ukusebenzisa imigqa umshini wokugcwalisa uwoyela ekhaya ukuvikela impilo yamalungu omndeni. Ngakho-ke ake sithole ukuthi yimiphi imishini yokunyathelisa kawoyela emihle edumile namuhla.
1 Uyini umshini wokucindezela amafutha?
2 Ingabe kufanele ngisebenzise umshini wokucindezela amafutha?
3 Imibandela yokukhetha umshini wokucindezela uwoyela omuhle
4 Imishini yokunyathelisa kawoyela emi-5 ehamba phambili ethengiswa kakhulu namuhla
4.1 1. I-Bozy oil press 01
4.2 2. ZYJ-901
4.3 3. Cindezela uwoyela i-LYF 501
4.4 4. Mishio MK39
4.5 5. I-Nanifood NNF-800A . Umshini Wokucindezela Kawoyela
Uyini umshini wokucindezela amafutha?
Umshini kawoyela ukhama iyithuluzi elikwazi ukucindezela, ukuhlukanisa uwoyela ezitshalweni ezifana ne-gac, isesame, amakinati, ubhontshisi wesoya, ukhukhunathi …. ngokusebenzisa ingcindezi nokufudumala. Lezi zithako, ngaphansi kwethonya lokucindezela okukhulu, zizokhiqiza amaconsi kawoyela anenani eliphelele lokudla okunempilo, amavithamini kanye nephunga elingokwemvelo, eliphephile empilweni yomsebenzisi.
Umgomo wokusebenza kwalo mshini ukusebenzisa i-torque enkulu yokucindezela ehlanganiswe nokusetshenziswa kokushisa ukudala ukungqubuzana ngenjongo yokushisa nokucindezela ukuhlukaniswa kwamafutha ekamelweni elikabili. Ngalo mphumela, wonke amafutha ezithako azophela kodwa agcine inani lokudla okunempilo kwalowo mkhiqizo.
Ingabe kufanele ngisebenzise umshini wokucindezela amafutha?
Umshini kawoyela ukhama Namuhla, isithandwa kakhulu phakathi kwemindeni. Lokhu kungenxa yokuthi lo mugqa womkhiqizo ungakhama izinhlobo eziningi zezithako ezinjengamakinati, imbewu ye-canola, ubhontshisi womnqumo noma ama-walnuts, imbewu kabhekilanga kalula futhi ngokushesha.
Amaconsi kawoyela ngemva kokucindezelwa ngaphandle asahlanzekile ngo-100%; ilungele amalungu omndeni wakho ukuthi akusebenzisele izinjongo eziningi ezahlukene njengokupheka, ukuthosa noma ukusetshenziselwe ukunakekela isikhumba, ubuhle, ukudla okusebenzayo …, kuphephe kakhulu empilweni yezingane Abantu.
Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo ojwayelekile wokunyathelisa uwoyela wasendlini ungacindezela u-4.5 – 5kg wezithako/ihora futhi ukhiqize inani elifanele likawoyela, usize umndeni wakho ukuba uwusebenzise isikhathi eside. Lokhu akugcini nje ngokusindisa izindleko zomndeni wakho kodwa futhi kuqinisekisa ubumsulwa nokuphepha lapho usebenzisa.
Ngaphandle kwalokho, umshini wokunyathelisa wamanje unikeza umphumela omuhle kakhulu wokucindezela uwoyela; ingakhama amafutha ezintweni ezingavuthiwe; ukusiza ukugwema ukumosha. Akugcini lapho, ungasebenzisa futhi leli thuba lokucindezela ukwenza amafutha omndeni, abangani nezihlobo. Lesi isipho esibaluleke kakhulu ukukusiza unakekele impilo yalabo abaseduze kwakho.
Ngakho-ke, ngezinzuzo ezingenhla, kungaqinisekiswa ngokuphelele ukuthi umshini wamafutha uyithuluzi elidingekayo, okufanele libe khona emindenini yanamuhla yanamuhla.
Imibandela yokukhetha umshini wokucindezela uwoyela omuhle
Ukukhetha ukuthenga umshini omuhle wokucindezela amafutha akugcini nje ukusindisa izindleko nezinto zokusetshenziswa, kodwa futhi kubonisa ukuthi ungumthengi ohlakaniphile. Ngakho-ke, ukuze ukhethe umshini wokugcwalisa uwoyela kuhle futhi kuwufanele umndeni wakho, kunemibandela embalwa okudingeka uyinake. Ngokulandelayo:
Khetha umshini wokucindezela uwoyela ngokusekelwe kumthamo womkhiqizo: Umshini wokucindezela uwoyela ofanele ukusetshenziswa kwasendlini namuhla ngokuvamile unomthamo we-350 – 750W. Nokho, umkhaya ngamunye unezidingo ezingafani. Ngakho-ke, kufanele ucabange ukukhetha umugqa womkhiqizo onamandla afaneleka kakhulu ukuze uqinisekise ukonga izindleko futhi unciphise ukungasebenzi kahle okungenzeka.
Khetha umshini wokucindezela uwoyela osuselwa kumpahla yegobolondo: Impahla yegobolondo lokucindezela uwoyela ingaba ipulasitiki, insimbi ecijile noma insimbi engagqwali kuye ngomthamo wokucindezela. Kodwa-ke, kufanele unikeze okuncamelayo emikhiqizweni enamagobolondo ensimbi engagqwali ukuze uqinisekise ukuhlanzeka okulula ngemva kokusetshenziswa kanye nokusiza umkhiqizo uhlale isikhathi eside ngokuhamba kwesikhathi.
Khetha umshini osuselwe esilinganisweni sokucindezela uwoyela: Umshini wokucindezela uwoyela omuhle kufanele uqinisekise ukuthi izinga lokucindezela uwoyela lifinyelela ku-80%, ngaphandle kokusala.
Khetha umshini wokunyathelisa ngokusekelwe emisebenzini ehambisana nalokhu: Imisebenzi emibili ebalulekile okufanele ifakwe emshinini wasekhaya isondo lokuqondisa umshini wokucindezela kanye neswishi yokuhlehla shaft. Kulapho kuphela lapho uyoba lula khona ukusebenzisa lolu hlobo lomshini.
Khetha umshini wokunyathelisa ngokusekelwe kumkhiqizo kanye nemvelaphi yomkhiqizo: Lokhu futhi kuyisici esibalulekile ukukusiza ukuthi uthenge umshini wokucindezela amafutha wekhwalithi enhle ngesikhathi eside sewaranti; ukuqinisekisa ikhwalithi.
Imishini yokunyathelisa kawoyela emi-5 ehamba phambili ethengiswa kakhulu namuhla
Ukuze abathengi bakwazi ukukhetha umugqa umshini wokugcwalisa uwoyela Imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu yomndeni wakho, ingxenye elandelayo yesihloko izokwethula emikhiqizweni emi-5 ehamba phambili namuhla. Sicela uthintane futhi ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu womndeni wakho.
1. I-Bozy oil press 01
I-Bozy 01 iwumugqa womkhiqizo odume kakhulu wokucindezela amafutha wamakinati namuhla. Lo mkhiqizo ulungele kakhulu imindeni noma amabhizinisi amancane.
Lo mkhiqizo wokunyathelisa unomshini wokunyathelisa owenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, ngakho uphephe kakhulu futhi uhlala isikhathi eside. Ngaleso sikhathi, i-press case yenziwe ngepulasitiki eqinile enemibala emi-2 enhle neyinkimbinkimbi. Isitsha sempahla kanye nethreyi lamafutha eliqediwe zombili zenziwe ngepulasitiki eqinile.
Ngakho-ke, inzuzo yokuqala yokukhuluma ngalo mkhiqizo ukuthi ilula ngesisindo, kulula ukuyihambisa ezindaweni ezahlukene ekhishini lakho.
Akukhona lokho kuphela, lo mshini wokunyathelisa futhi kulula kakhulu ukuwuhlanza nokuhlanza ngemva kokusetshenziswa. Indlela yokusebenzisa umshini nayo ilula kakhulu, udinga nje ukucindezela inkinobho yamandla kanye nenkinobho yokushisa bese ufaka izithako, umshini ungasebenza kahle.
Nge-Bozy 01, ungacindezela uwoyela ezithakweni eziningi ezahlukene, kusukela kumakinati, usesame, ubhekilanga, ama-walnuts kuya kumbewu ye-canola noma ubhontshisi womnqumo…. ikulethela imithombo ehlukahlukene yamafutha emifino, afanele izinhloso eziningi ezahlukene. Ikakhulukazi, lo mkhiqizo unamandla okukhipha uwoyela afinyelela ku-90%, okukusiza ukuthi wonge izindleko ngokuya ngezinto zokusetshenziswa.
Kodwa nokho, lo mugqa wokunyathelisa ungakhama amafutha okupheka kwezinye izimbewu nezithelo ezifana ne-gac noma ukhukhunathi…. ikusiza ukuthi uthole umthombo obalulekile wezithako zobuhle nokunakekelwa kwezempilo. Ngalo mkhiqizo, ungacindezela kuze kufike kumalitha ama-3 kawoyela ngosuku. Ngaleli nani lamafutha, ungawaletha kubangani bakho nezihlobo noma udayisele umuntu oswele.
Intengo yesithenjwa: 5,900,000 VND
Ukuba ne-ZYJ-901 kungenye yezindlela ezibalulekile zokukusiza unakekele impilo yamalungu omndeni wakho. Lokhu kungenxa yokuthi lo mkhiqizo ungakhama uwoyela wokupheka ezithakweni ezinjengamakinati, isesame, imbewu ye-sunflower, ama-walnuts, imbewu ye-canola, amafutha omnqumo … into enomsoco ogcwele, amavithamini kanye ne-flavour.
Lo mkhiqizo wenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme njengegumbi lokucindezela uwoyela kanye ne-extrusion shaft eyenziwe ngensimbi engagqwali ye-monolithic 304, ngakho ihlala isikhathi eside kakhulu futhi iqinisekisa ukuhlanzeka kokudla nokuphepha. Amafutha ngemva kokucindezelwa azovuthwa ngenjongo yokugcina isikhathi eside ngesivikelo sokushisa esingaphambili. Umshini unesakhiwo sokusingatha esiphusile, kulula ukusebenza futhi sisebenzise.
Nokho, lo mkhiqizo awucindezeli ubhontshisi wesoya. Ngaphandle kwalokho, i-ZYJ-901 nayo ayikwazi ukusebenza ngaphezu kwamahora angu-5/isikhathi ukuze kuqinisekiswe impilo engcono kakhulu nokuqina komshini.
Intengo yesithenjwa: 6,450,000 VND
3. Cindezela uwoyela i-LYF 501
I-LYF 501 iwumugqa umshini wokugcwalisa uwoyela umklamo omncane uhlangene impela, ulula kodwa usenobukhazikhazi ngokwedlulele futhi wesimanje. Lo mshini wenziwe ngokuphelele ngensimbi engagqwali yezinga eliphezulu enegumbi lokucindezela kanye ne-pressing shaft eyenziwe ngensimbi engagqwali engu-304; ukuhlinzeka ngokuhlanza okulula kanye nokuqinisekisa ukuphepha kokudla; ukuqina ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ngalo mshini, ungakwazi ukukhama izinhlobo eziningi zembewu ezinjengamakinati, ubhekilanga, ama-walnuts, imbewu ye-canola, ubhontshisi womnqumo, njll. Amafutha ngemva kokucindezelwa azoshiswa ngekhanda lokushisa eliphezulu; ikuvumela ukuthi ugcine amafutha isikhathi eside.
Kodwa-ke, kufanele uqaphele ukuthi uwoyela ocindezelwe kulo mshini awucacile ngokuphelele. Ngakho-ke, kufanele ushiye i-sediment futhi uyihlunge futhi ukuze ube nowoyela wekhwalithi engcono kakhulu, ecacile.
Ukuze usebenzise le modeli yokucindezela, udinga nje ukuvula inkinobho yokushisa bese ulinda cishe imizuzu engu-5-7 ukuze ithiphu elishisayo likwazi ukufaka izithako. Okulandelayo, cindezela iswishi ukuze umshini uzicindezele futhi izithako zizogeleza phansi.
Uma kwenzeka umshini we-LYF501 ubambekile ngesikhathi sokusetshenziswa, udinga nje ukucindezela futhi ubambe inkinobho Yokuhlanza cishe imizuzwana engama-20 futhi okokusebenza kuzobuyiselwa emuva, kulula kakhulu. Ngemuva kokusebenzisa umshini, sicela uvale iswishi, ukhiphe amandla bese ulinda ukuthi umshini uphole ngaphambi kokuhlanza. Lapho uhlanza umshini, udinga nje ukususa induku yokushisa kanye negumbi lokucindezela langaphambili bese usula ngendwangu.
Intengo yesithenjwa: 7,500,000 VND
4. Mishio MK39
I-Mishio oil press MK39 inomklamo ohlangene, omuhle onemibala evelele ngokwedlulele. Lo mshini unegobolondo langaphandle elenziwe ngepulasitiki ye-PP engazweli, ngakho-ke amelana kakhulu nokuphuka; Kuncane okujwayele ukuklwebheka futhi kulula kakhulu ukuhlanza.
Ngalo mugqa wokunyathelisa, ungakwazi ukukhama amantongomane ahlukahlukene, kusukela kumakinati, ubhontshisi wesoya, isesame namafutha kakhukhunathi … Amafutha emifino aqediwe acacile kakhulu, awafaki ugwebu futhi awadingi ukuphekwa futhi.
Umshini ufakwe amandla angu-430W, ngakho-ke ungakwazi ukukhama u-5kg wezinto zokusetshenziswa ngehora ngesilinganiso sokucindezela esifika ku-95%. I-hopper yembewu inomthamo omkhulu ongu-300ml futhi yenziwe ngepulasitiki ye-PP, ngakho-ke kuphephile ukuthinta ukudla isikhathi eside.
Khonamanjalo, ingxenye yesigayo esivunguzayo sokuchoboza nokuchoboza imbewu kanye nensingo yenziwe ngensimbi engagqwali, ngakho-ke iqinile futhi iphephile ukuyisebenzisa, futhi kulula kakhulu ukuyihlanza.
Imbewu, lapho ifakwa ku-hopper, izophushwa phansi kushafti yokunyathelisa kanye negumbi lokucindezela. Le ngxenye yegumbi lokunyathelisa izoshiswa ekushiseni okufanele ukuze kuqinisekiswe ukuthi imbewu yomile ekushiseni kokukhipha amafutha. Imbewu ibe isigaywa futhi icindezelwe ukuze kukhishwe amafutha. Amafutha ngemva kokwehlukana azogelezela ekhomishini futhi okusele kukhishwa emgqeni ohlukile futhi kuthreyi ehlukile. Umshini unezinkomishi ezi-2 ezihlukene zamafutha nezinsalela, ngakho-ke kulula kakhulu ukuhlanza.
Akugcini lapho, i-Mishio MK39 iphinde yakhelwe ngesisekelo sokulwa nokushelela, esiza ukugwema ukushelela nokugudluka ngesikhathi sokusebenza komshini. Ukusebenzisa lo mshini futhi kulula kakhulu ngephaneli yokulawula ye-elekthronikhi, okukuvumela ukuthi ukhethe izinketho ezahlukene zembewu enkulu noma encane ukuze ukwandise ukusebenza kahle kwamafutha okucindezela.
Ukuhlanza lo mkhiqizo nakho kulula kakhulu lapho izingxenye zomshini zingahlakazwa. Akukhona lokho kuphela, umshini futhi ufika nesihlungi samafutha namagilavu, okwenza ukusetshenziswa komshini kuphephe, kusheshe futhi kuhlanzeke.
Intengo yesithenjwa: 2,900,000 VND
5. I-Nanifood NNF-800A . Umshini Wokucindezela Kawoyela
I-Nanifood NNF-800A iwumndeni wemishini yokunyathelisa kawoyela ehlala isikhathi eside kakhulu namuhla, esetshenziswa kabanzi emindenini yanamuhla, esiza ukuvikela kangcono impilo yabantu.
Ngalo mshini, ungakhama uwoyela wemifino ezinhlotsheni eziningi zembewu efana namakinati, ukhukhunathi, usesame, iminqumo, ama-walnuts ngisho ne-moringa…. enekhono lokuqeda cishe wonke amafutha aqukethwe kulezo zinto. Imikhiqizo kawoyela yemifino etholiwe iqinisekisiwe ukuthi imsulwa ngo-100%, iphephile empilweni yabasebenzisi.
I-Nanifood NNF-800A inomshini wokunyathelisa futhi izingxenye ezithintana ngokuqondile nokudla zenziwe ngensimbi engagqwali, ngakho iqinile futhi kulula ukuyihlanza. Akukhona lokho kuphela, lo mshini futhi ufakwe imodi yokuhlehlisa izinto uma kwenzeka ubhajwe ngesikhathi sokusetshenziswa.
Umshini unamandla angu-180W, ngakho-ke ulungele ukusetshenziswa emindenini yanamuhla. Umkhiqizo unesisindo esingu-5.5kg, ngakho-ke kulula kakhulu ukuwuthwala futhi usuke endaweni eyodwa uye kwenye.
Intengo yesithenjwa: VND 5,190,000
Nazi eziphezulu ezingu-5 umshini wokugcwalisa uwoyela izitshalo ezithandwa kakhulu namuhla. Ngale mikhiqizo, ungakha ngokuphelele amafutha emifino ekhaya ngezithako ezihlukahlukene, ukuhlangabezana nezidingo eziyingqayizivele zamalungu omndeni wakho.
Xem Thêm [Review] Top 8 máy đẩy tinh chất tốt đáng mua nhất hiện nay | Muasalebang
Điện thoại smartphone nhỏ gọn dễ cầm | Chính hãng, GIÁ RẺ 05/2022 | Muasalebang
Tổng hợp 40 cách làm thịt lợn xào đơn giản thơm ngon hấp dẫn ai cũng mê | Muasalebang